Contact Us - Somali - cohealth - Community Health Service
Home / Contact / Contact Us – Somali
Contact Us – Somali
Adeegyada iyo ballamaha
Si aad u ogaato wax ku saabsan adeegyadeena jira iyo kuwa kuu dhow:
Collingwood, Fitzroy, Carlton iyo Melbourne CBD – 9411 4333
North Melbourne, Kensington, Essendon, Strathmore, Niddrie iyo Reservoir – 8378 3500
Footscray, West Footscray, Braybrook, Sunshine, St Albans, Deer Park Hoppers Crossing, Werribee, Sunbury iyo Melton – 8398 4100
Turjumaanada – Helitaanka lacag la’aanta ah ee turjumaanada. Ka wac 13 14 50 weydii inay naga soo wacaan mid ka mid ah lambarada kore.
Helitaanka Diiwaannada Daaweynta
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato helidda macluumaadka caafimaadkaaga waxaadna codsan kartaa in la saxo haddii ay lagama maarmaan tahay.
Fadlan buuxi Foomka Codsiga Helitaanka ee Diiwaannada Daaweynta, oo laga helo miiska qaabilaadda ee adeegga cohealth ee kasta ama ka soo-degsi halkan. Waxaan kaa qaadi karnaa xoogaa ujrad ah (sidii qaanuunku ogol yahay) ee la xiriirta footo-koobiga iyo soo diridda macluumaadkaas.
Waan qadarinaynaa warcelintaada
Fdlan noo sheeg haddii aad ku faraxsan tahay iyo haddii aadan ku faraxsanayn adeegyadeena nalana wadaag talo-soojeedintaada si wax loogu hagaajiyo. Warcelintaadu waxay noo sheegaysaa waxaan si fiican u samaynayno iyo wixii ay tahay inaan hagaajino. Waxaa jira siyaabo badan oo aad warcelin nagu siin karto:
buuxi foomka warcelinta oo laga helo mid ka mid ah adeegyadeen kuna rid halka sanduuqa warcelinta
ku soo buuxi foomkeena warcelinta online
ka-soo-degso foomka warcelinta halkan boostadana ku soo dir
adoo warqad usoo qora Maareeyaha Tayada, cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, 3011
ka soo wac Maareeyaheena Tayada taleefanka 9448 6102
email usoo dir feedback@cohealth.org.au
Ka hubi bogga shaqooyinka ee cohealth wixi jagooyin ah oo bannaan markaasna raac tilmaamaha si aad u soo-gudbiso codsigaaga.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan meelaynta ardayda iyo in la soo-codsado ka eeg boogeena ardayda.
Folanteeri nala noqo
Ogow sida folanteerida looga noqdo cohealth iyo sida loo soo codsado ka eeg bogga folanteerada. Boosaska bannaan ee folanteerka hadda jira waxaa laga heli karaa boggeena shaqooyinka codsiyadana waxaa laga samayn karaa online.
cohealth waxay kugu casuumaysaa inaad nagu caawiso inaan adeegeena wanaajino. Diiwaanka Ka-qaybgalka ee cohealth waa mid ka mid ah siday xubnaha bulshadu uga qaybgeli karaan caafimaadka iyo ladnaanta bulshadooda. Muujinta dalabka oo ka socda dadka doonaya inay fikrado ku darsadaan daryeelka caafimaadka oo ka socda bulshada, itijaaha daryeelaha iyo/ama macaamiilka waa la soo dhaweynayaa. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsanka-qaybgalka bulshada iyo inaad ku darto faahfaahintaada diiwaanka ka eeg bogeena ka-mid noqo.
Fadlan xiriir toos ah la samee shaqaalaha cohealth ama ;email u dir waaxdeena akoonada .